I-Bauh: Imenenja yephakheji yokuqhafaza yezinhlelo zokusebenza eziningi ze-Linux | Kusuka kuLinux
Kusukela, Izinhlelo ezisebenza mahhala futhi ezivulekile, njenge I-GNU / Linux bathambekele ekubeni nezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza ngamafomethi ahlukile, okunye okuwusizo kakhulu noma okusebenzayo kunezinye, ukuba nezinhlelo ezisebenza njengazo Izitolo zeSoftware, ngefomethi eyodwa noma ngaphezulu kuzohlala kuyinto ewusizo kakhulu.
Ngakho-ke, izinhlelo zokusebenza ezifana "Bauh", zizohlala ziyindlela ethandekayo nenhle kakhulu kunokwendabuko Abaphathi Bephakheji Bomdabu (I-GUI ne-CLI) ifomethi eyodwa. Ngoba, ukwakhelwa ukusebenza njengeMphathi wePakeji yamafomethi ahlukile, kusebenza njenge Isitolo sohlelo lokusebenza jikelele.
Ngaphambi kokungena emininingwaneni mayelana "Bauh", kufanelekile ukuthi kukhona futhi okunye uhlelo lokusebenza olufanayo shayela «Uhlelo Lokusebenza» esivele sishicilele phambilini. Ngakho-ke, uma kwenzeka ufuna ukuhlola lokho kushicilelwa ngemuva kokuqeda lesi sipho, sizoshiya isixhumanisi esingezansi:
"I-App Outlet uhlelo oluthokozisayo olusivumela ukuthi sigxile esimeni seSitolo se-Inthanethi izicelo ezahlukahlukene futhi eziwusizo zezinhlelo zethu zokusebenza ezikhululekile futhi ezivulekile, ngokuya ngamafomethi amasha ahlukile wokufaka (i-Flatpak, i-Snap ne-Appimage) etholakalayo." I-App Outlet: Isitolo somhlaba wonke sezinhlelo zokusebenza ze-GNU / Linux
1 I-Bauh: Isibonisi sokuqhafaza sokuphatha izinhlelo zokusebenza ze-Linux
1.1 Yini iBauh?
I-Bauh: Isibonisi sokuqhafaza sokuphatha izinhlelo zokusebenza ze-Linux
Ngokusho kwe- iwebhusayithi esemthethweni ku-GitHub, uhlelo lokusebenza "Bauh" (ibizwa ba-oo), eyayaziwa phambilini ngokuthi "Fpakman" es:
"Mina iI-graphical interface yomsebenzisi (i-GUI) yokuphatha izinhlelo zokusebenza ze-Linux. Isekela i-AppImage, i-Arch (amakhosombe / i-AUR), i-Flatpak, i-Snap nezinhlelo zokusebenza zewebhu zomdabu."
Phakathi kwezimpawu eziyinhloko ze- "Bauh" okulandelayo kungashiwo:
Iphaneli Yezokuphatha: Lapho ungasesha khona, ufake, ukhiphe, uvuselele, wehlise futhi usebenzise izinhlelo zokusebenza.
Imodi yethreyi: Inekhono lokuqala kuthileyi wesistimu futhi ishicilele izaziso uma izibuyekezo zesoftware zitholakala.
Isipele sesistimu: Ingahlanganiswa nesicelo seTimeshift ukuhlinzeka ngenqubo yokulondoloza elula nephephile ngaphambi kokufaka izinguquko ohlelweni.
Izindikimba ezenziwe ngokwezifiso: Ivumela ukwenza ngezifiso isitayela (ukubukeka okubonakalayo) kwesixhumi esibonakalayo sokuqhafaza.
Ngaphezu kwalokho, ngohlobo ngalunye lwefomethi yefayela, inemisebenzi ethile noma imikhawulo ethile. Ngokwesibonelo:
Mayelana namaphakeji we-AppImageAmafayela we-AppImage x86_64 kuphela atholakala ngendlela yokusesha okwamanje. Futhi kunconywa ukuthi ungafaki noma ukhiphe i-AppImageLauncher ukugwema ukwehluleka ngesikhathi sokufakwa kwezicelo zalolu hlobo.
Mayelana ne-Arch / AUR packageIwaphatha kuphela njengokutholakala kumasistimu asekelwe ku-Arch. Iphatha izingxabano ezingaba khona, ukufakwa kwephakeji elahlekile noma ongakukhetha, nasemithonjeni ehlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, ivumela ukuhlanganiswa ne-rebuild-detector.
Mayelana namaphakheji we-Flatpak: Ivumela izinhlelo zalolu hlobo ngezibuyekezo ezinganakwa ukuthi zichazwe ngefayela «~/.config/bauh/flatpak/updates_ignored.txt» nakho konke okuphathelene nale fomethi kungalungiswa ngefayela lokumisa elilandelayo: «~/.config/bauh/flatpak.yml».
Mayelana ne-Snap: Ikuvumela ukuthi uvuselele (uvuselele) ukubuyekezwa kwamanje kwezinhlelo zokusebenza ze-Snap ezifakiwe. Yenza ushintsho lweziteshi zomthombo ezifanayo nakho konke okuhlobene nale fomethi kungalungiswa ngefayela lokumisa elilandelayo: «~/.config/bauh/snap.yml».
Mayelana ne-Webapps: Ivumela ukwenziwa kwe-Webapps ngokukhombisa i-URL kanye nedatha elula embalwa.
Njengoba, iyi- python isicelo futhi ifaka ne- Umphathi wephakheji yepip, udinga nje ukuyifaka ngemiyalo elula elula:
Faka ukuncika okudingekayo
Note: Ukuthola eminye imininingwane nge "Bauh" ungavakashela iwebhusayithi yabo esemthethweni kuwebhusayithi ye- Amaphakeji wepip.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Bauh», isikhombimsebenzisi sokuqhafaza esihehayo futhi esisebenziseka kakhulu (i-GUI) esakhelwe ukusebenza njengomphathi wephakheji yamafomethi ahlukile, ngendlela yokuthi sisebenze njengesitolo sohlelo lokusebenza jikelele noma esinamafomethi amaningi; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Bauh: Imenenja yephakheji yokuqhafaza yezinhlelo zokusebenza eziningi ze-Linux